Uyivula njani i-Samsung Galaxy S yasimahla | I-Androidsis
Kwesi sifundo silandelayo, sitshekishwe kuzo zombini iimodeli, ndiza kuchaza amanyathelo oza kuwalandela vula i-Samsung Galaxy S kunye ne-Samsung Galaxy SII, ngokukhululekileyo nangendlela elula kakhulu. ¿Uyazi njani ukuba iselfowuni ayitshixwanga?
Isicelo ekuza kusetyenziswa kuso, siyafumaneka kwifayile ye- Dlala iVenkile, ibizwa ngokuba yiGlass S Unlock, nayo kwaye ilandela iingcebiso endiza kukuxelela apha ngezantsi, ezibaluleke kakhulu kuzo zonke kukuba singabasebenzisi beengcambu, kwimizuzu engaphantsi kwemibini, Siza kuyikhupha kwaye isebenze kuwo nawuphi na umsebenzisi.
1 Imiqondo ekufuneka igcinwe engqondweni
2 Iimodeli ezihambelana nokusetyenziswa
3 Inkqubo emayilandelwe
Imiqondo ekufuneka igcinwe engqondweni
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba ukuba sinefowuni phantsi kwewaranti, le nkqubo iyakususa isiphumo sesiqinisekiso, kuba kusenziwa, isicelo I-Galaxy S ivule, iya kuguqula iifayile zenkqubo yangaphakathi yesixhobo sethu ukufezekisa ukukhutshwa okulindelweyo kwesiphelo sethu.
Kuya kufuneka uqhagamshelwe kwi-intanethi Ukuze esi sicelo sisebenze ngokuchanekileyo, unxibelelwano luya kufaneleka zombini ngeWifi njengezinga lethu ledatha, okanye 3G.
Enye into ekufuneka siyithathele ingqalelo yile Kuya kufuneka ukuba isiphelo sethu similiselwe ukuze isicelo sikwazi ukufezekisa injongo yaso yokuvula i-Samsung Galaxy S, kwaye xa ndisithi Y, andithethi nje ngemodeli GT-I9000.
Iimodeli ezihambelana nokusetyenziswa
Ngokutsho kwam ndiye ndakwazi ukuqinisekisa buqu, esi sicelo sisebenza kwezi modeli zosapho zilandelayo Galaxy S:
Zonke ezi terminals bezikho ikhutshwe ndim buqu, kwaye impumelelo iye yavakala.
Inkqubo emayilandelwe ilula kakhulu, kuqala, kwaye xa isiphelo sendlela sizinzile, siya kukhuphela usetyenziso lwefayile Play Store.
Emva kokukhutshelwa kwaye sifakwe ngokuchanekileyo, siya kuvula ifayile ye- I-Galaxy S ivule kwaye siyakwamkela iimvume Umsebenzisi omkhulu, Isikrini esinjengalesi siza kuboniswa:
Indawo yokuqala, kwaye njengoko sinokubona kwiscreen sesicelo, siza kucofa kwinombolo yokuqala. Kweli nqanaba, usetyenziso ngokwalo luya kujongana nokwenza i copia ukusuka kukhuseleko lwefolda ye-EFS, eyifolda ebekwe ngaphakathi kwifayile yenkqubo yesiphelo sethu, equlathe idatha ebaluleke kakhulu njengeyethu IMEI.
Eli nyathelo libaluleke kakhulu, kuba ukuba ngaba ngexesha lokukhutshwa, izakucinywa ngengozi, kunye nesipele kunye nokuba ngabasebenzisi Umsuka, sinokuyibuyisela ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Kwinyathelo elilandelayo kufuneka sikhethe ukhetho olusondele kakhulu kuhlobo lwe-Android esiyifakileyo, yiyo loo nto Kukho iindlela ezimbini ezinokuphawulwa ngenani lesibini.
Ukuba singabasebenzisi be I-Eclair okanye i-Android 2.1, Siza kukhetha ukhetho lokuqala oluphawulwe ngenani lesibini.
Ukuba singabasebenzisi be Froyo okanye iGingerbread, Okanye yintoni enye, Android 2.2 y Android 2.3 Siza kukhetha ifolda yesibini ephawulwe ngenani lesibini.
Nje ukuba ukhetho olufanelekileyo lukhethwe, siya kulinda ngaphandle kokuchukumisa nantoni na, ifowuni iya kuhlala kunye nekrini elimnyama, iya kwenza izinto ezingaqhelekanga, oku kuyinto eqhelekileyo, ngoko asiyi kubamba nantoni na kwaye silinde ifowuni iqala kwakhona.
Le nkqubo inokuthatha ukuya kuthi ga ubuninzi bemizuzu emibini, ihlala ithatha malunga nemizuzwana engamashumi amathandathu.
Kanye Iqale kwakhona iGlass, siza kuvula isicelo kwakhona kwaye ukhethe ifayile ye inombolo yesithathuSiza kuboniswa kwesikrini ngolu hlobo lulandelayo:
Siza kucofa ku-Kulungile kwaye ifowuni izakuqala kwakhona ukuphelisa inkqubo iyavula.
Ngoku Sele sikhululile ngokuchanekileyo imodeli yethu Usapho de Samsung, Siza kuvavanya ukuba yonke into isebenza ngokuchanekileyo ngokufaka i EWE nakuwuphi na omnye umsebenzisi ngaphandle kweyokuqala ifowuni kwaye sinokuqinisekisa ngokungathi ngomlingo, ukuba siyalamkela ikhadi kwaye sinako ukutsala umnxeba.
Inyathelo lesine lesicelo, kufuneka sikwenze ukuba qaphela naluphi na uhlobo lwesiphene, ezinje ngokuba asiqhagamshelekanga kuyo nayiphi na inethiwekhi, asikwazi ukwenza iminxeba, iBluetooth yethu ayisebenzi, nezinto ezinxulumene noko uqhagamshelo kwifowuni yethu, kuba olu khetho lolwe- buyisela ifolda ye-EFS.
Khuphela-iGlobal S Unlock
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Indlela yokuvula i-Samsung Galaxy S kunye ne-Samsung Galaxy SII nge-Galaxy S Unlock
Izimvo ezi-138, shiya ezakho
ICoco sili sitsho
Akukho thuba. Kuyandiphosa impazamo xa ndikopa i-EFS. Ndinomnyele we-S2
Phendula uCoco Sili
Ewe, ewe, ndiyigxile nge-superclick ... Ngaba kukho naziphi na iingcebiso?
Akuninzi ngenxa yenkampani ukuba ndinomdla wokuyikhulula, kusafuneka ndigqibe ukuyihlawula. Yintoni enomdla kum kukukwazi ukuyihlaziya kwii-ics. Inkqubo ye-homologation yabasebenzi base-Argentina ilawulwa ngabantu abane-IQ ephantsi.
NgeNokia utshintsha «ikhowudi yemveliso» kwaye yiyo loo nto. Ngaba ikhona into efanayo nge-Android?
Ukuyihlaziya kwi-ICS akuyomfuneko ukuyikhupha, landela nje le khosi ukuyisusa kwaye uyibuyise, emva koko unokufaka nayiphi na i-Rom oyifunayo
Akukho mhlobo walonto singuye
Molo uFrancisco. Ndingumsebenzisi we-sgs2 one-vodafone ics 4.0.4. Ngaba uyazi ukuba ungayivula ngokuvula kwe-galaxy s? kukuba ndizamile nge-galaxy s2 sim yokuvula kwaye inika ikhowudi yokuvula kodwa ke ayibuzi xa ndibeka enye sim kuyo, kwaye ayiyivuli.
Ndicinga njalo, kodwa andazi ukuba ndikuxelele ntoni.
Ngaba ukhona umntu owake wayizama nge-ICS?
Nge-9 kaNovemba ngo-2012 ngo-13: 43 PM, uDisqus wabhala:
Molo FRANCISCO NDINGATHANDA UKWAZI UKUBA NDINGAVULA KANJANI I-SAMSUNG YAM KWAYE KU-QM NDIYIBHEKE ESPAIN YAYE ISIYEKE I-SIM NETWORK IVULA IPHINI IYA KUBA NGUWE UNGANDIXELELA INTO ENDINGAYIQONDIYO NANINI NA NDIYATHEMBELA IMPENDULO YAKHO.
Inethiwekhi ayifumaneki, ubume besitshixo sim, imei null / null… kwi-samsung gt i9003. Khange ndikwazi ukukhulula, ukuba ngumcimbi wokukhululwa!
Ndizamile ukulandela imiyalelo yakho kodwa ndiyalahleka endleleni, enkosi.
isebenzela ii-ics 4.0.4?
Ewe, khange ndizame, kodwa ndicinga ukuba akukho nto iya kwenzeka ukuzama.
Ndizamile kwaye iyasebenza, IMIYALEZO EFANAYO AYIPHUMI, kodwa ndiyilinge ngelinye ikhadi elivela kwenye inkampani kwaye ilungile 😉
Yeyiphi mobile oyisebenzisileyo?
Nge-12/08/2012 ngo-22: 20, «Disqus» wabhala:
Ukuba singabasebenzisi be-ICS CREAM, loluphi ukhetho esikunika lona kwisinyathelo sesibini? Enkosi
Kubonakala kum ukuba isicelo sihlaziyiwe kwaye akusafuneki ukhethe uguqulelo lwe-Android, kufuneka ukhethe inombolo yesibini.
Ayisebenzi kum, kufuneka ndiyenze nekhadi lenye inkampani ngaphakathi kwiselfowuni yenye inkampani, akunjalo?
Ngaba ukhona umntu owake wayizama nge-S Plus?
Ndinengxaki efanayo ukuba awazi ukuba ndiyakwazi ukuvula iS Plus. Ukuba uphumelele, ndixelele njani
Ifowuni yam ithatha i-10min. ngescreen esimnyama, emva kokwenza inyathelo lesibini, kwenzeka ntoni ????????
Ngaba uyisombulule? Ndicinga ukuba uya kuba ngumsebenzisi wengcambu?
Xa ndicofa u-1 kwaye ewe undixelela impazamo, engagcinwanga kwaye andinawo amanani amabini 2, ine-1 kuphela. Uncedo kwaye ndiyabulela
Kwenzeka into efanayo kum, ndingayisombulula njani?
Kwenzeka into efanayo kum, ithatha ngaphezulu kwemizuzu eli-10 kwaye ayiveli kwiscreen esimnyama
Meyi_100 wokuqala sitsho
U-ami akenzi backup kwifolda u-Efs uthi »Impazamo ayigcinwanga»
Phendula ku-Meyi_100 wokuqala
Isebenze ngokugqibeleleyo, enkosi !!
YONKE INTO ILUNGILE, Kude Kube IXESHA LOKUZAMA UKUKHUPHELA IINKCUKACHA NGESIM ESINTSHA, KODWA IINKCUKACHA AZISEBENZI, KWIINYE IFONI UKUBA ZISEBENZA, NDINGENZA NTONI ????????
UDave gomezmerino sitsho
Yintoni le yokuba ngumsebenzisi wengcambu? yenziwa njani?
Phendula kuDave Gomezmerino
Oku akubalulekanga nganto, kungcono ukusebenzisa ii-sgs ukuvula ezifumaneka kwi-blackmart simahla, kulula kakhulu
Ukufaka umsebenzisi wengcambu kuya kuvumela usetyenziso olunjengokuvula i-galaxy ukuba isebenze njengolawulo kwaye yenze imisebenzi eyimfuneko ukuvula iselfowuni.
nangona ndifumana ukuba i-unlock_s galaxy ayisebenzi kwi-g s s plus.
Unokufumana ulwazi oluthe kratya kwi-youtube.
UIvo waseJamani Sparvieri sitsho
Molo! Unjani? Indlela isebenza kakuhle. Ngoku ndiyakucela ukuba ndifuna ukuyivimba kwakhona ukuze ndiyise kwinkonzo yezobuchwephesha yenkampani yeselula njengoko ndiyibuyisela umva ukuba kunokwenzeka. Ukususela sele enkosi kakhulu
Phendula kuIvo Germán Sparvieri
Le nkqubo ayibuyiseki kumhlobo.
Ngaba ikhona idatha kwifowuni elahlekileyo? abafowunelwa, ii-sms, imifanekiso, usetyenziso, useto ...
Ngokomgaqo hayi, ndiyenzile kwiGPS S kunye neGPS S2 kwaye andikaze ndilahlekelwe yiyo nantoni na
Molo, ndiyazama kwaye akazukundivumela ndidlule kwinyathelo lokuqala, ndingenza ntoni?
Molo, ndiwenzile amanyathelo njengoko kubonisiwe, kukhetho loku-1 lundinika impazamo, ndilicimile lonke ikhadi langaphandle, ngoku isikrini simnyama, bekuyimizuzu eli-15, ndiyazi ukuba khange ndicofe ukhetho 2 Kodwa okoko ifowuni ibitshixiwe ngokuzenzekelayo kungenzeka ukuba ndiyicofe ngempazamo, ndingenza ntoni ngoku? Ndiyayivula kwaye ilandele isikrini esimnyama, ibha yomgangatho ophezulu ibonakala ngexesha le-3g…. Ngaba ukhona umntu onokundinceda?
Molo ndenze amanyathelo njengoko ubonisile, okokuqala ndincothule iselfowuni kwaye ihambe kakuhle, kodwa xa ndisiya kumnyele we-S ungazijongi kukhetho loku-1 indinika impazamo, icime lonke ikhadi langaphandle (Andazi ukuba yeyiphi kwezi nkqubo zimbini), ngoku isikrini sam simnyama, sele iyimizuzu engama-30, ukuba ndiyazi ukuba andikhange ndicofe ukhetho 2 kodwa kuba ifowuni ibitshixe ngokuzenzekelayo kunokwenzeka ukuba ndiyicofe ngengozi xa uyivula, ndingenza ntoni? Ndiyayivula kwaye ilandele isikrini esimnyama, ibha yesimo esiphezulu ibonakala ngokugubungela, ixesha, i-3g…. Ngaba ukhona umntu onokundinceda? nceda enkosi
Ewe, ekugqibeleni undixelele ukuba le nkqubo ayiphenduli, ndiyinyanzelile ukuba ivalwe kwaye ibicotha nangoku. Ndiye ndayiqala kwakhona kwaye iifayile ezivela kwikhadi langaphandle ziye zavela! :), ngoku iya kwisantya esiqhelekileyo. Ngexesha okanye ngomso ndiza kuphinda ndizame.
Ubusuku obuhle, ndizamile kwakhona kwaye i-wick yahluleka kwakhona. Andikwazi ukudlula kwinqanaba 1, ayikhupheli kum. Inguqulelo ye-US evuliwe eyahlukileyo kuleyo uyibeke apha xa ingenayo indixelela ukuba yaphukile kwaye ixakekile ebhokisini kwaye apha ngezantsi ndifumana isilumkiso sokuba ndinokuba neengxaki nge-busybox kunye nolunye ugcino lwe-titanium, ngaba umntu othile angandinceda? Ukuba ndiya kukhulula ngaphambi kwenqaku 1 enye inketho iyavela, kufuneka ndiyicofe? Jonga ikhowudi ye-un unok
Kuya kufuneka uyimilisele ifowuni kunye nebhokisi exakekileyo ehlaziyiweyo kungenjalo ayizukusebenzela.
NgoSeptemba 27, 2012 00: 38 AM, Disqus wabhala:
Molo ngokuhlwa, enkosi ngokuphendula, ukuba ndiyibonile into exakekileyo, ndikhuphele i-titanium yogcino kodwa andiboni ukuba ndiyifaka njani ibhokisi exakekileyo andazi nokuba kungenxa yokuba inguqulelo yam ye-Android yi-2.3.4 gigerbread, can inento yokwenza nayo? Ngaba ungakhathazeka ukundixelela amanyathelo ekufuneka elandelwe? Ndihamba nentlanzi encinci.
Ngenisa ivenkile yokudlala ubeke iBusybox,
Uya kufumana ii -apps ezimbini zasimahla eziza kufaka i-bisybox,
nayiphi na eyakwenza.
NgoSeptemba 28, 2012 01: 46 AM, Disqus wabhala:
Enkosi kakhulu ngoncedo lwakho, sele ndikhutshiwe iselfowuni kwaye nditshekishwe yenye i-sim.
Ndilibele, iselfowuni incothulwe, ndifumana i-superuser icon, njengoko benditshilo kolunye uluvo, iscreen esivela kumnyele ongavalwanga S yahlukile kule uyibonisayo apha, kukho enye indlela ngaphambi kwenqaku 1.
Ndiyaluvuyela uncedo lwakho kuba bazakwenza ukuba ndibenokuphatheka kwaye khange ndikwazi ukuvula iselfowuni, ndiyenzile kuba bendicinga ukuba isimahla kodwa ndizamile ikhadi kwenye inkampani kwaye bekungekho.
Ndizamile nge-SGS unlok kwaye indixelela ukuba akukho khowudi kwaye ibuza ukuba ndinayo na i-galaxy s.
Andazi ukuba ndenzeni kwakhona, ndiphelelwe lithemba.
Ndineengxaki nge-galaxy s samsung eyayithunyelwe kum isuka e-usa, bayikhupha kwaye ndayisebenzisa phantse unyaka, kodwa ngoku ngequbuliso ayalamkeli ikhadi le-chip, iminxeba kunye nabafowunelwa be-msm njlnjl. ubuchwephesha obucingelwayo kodwa ndicima onke amaxwebhu anjengemifanekiso, iividiyo, umculo, njl. 1 iya kuba kukufumana kwakhona amaxwebhu am.
2 iya kuba kukuba kufuneka uyikhulule kwakhona ifowuni.
URaul sampedro sitsho
Ndilandele amanyathelo owabonisileyo, kwaye kubonakala ngathi yonke into ihambe kakuhle. Nokuba nekhowudi * # 7465625 #, indixelela ukuba isitshixo senethiwekhi SIVALIWE.
Ngenkampani yokuqala ifowuni isebenza ngaphandle kweengxaki. Kodwa xa ndibeka i-SIM yomnye umsebenzisi, iyayamkela kodwa ayindivumeli ukuba ndithumele okanye ndifumane iifowuni.
Ungandixelela ukuba kutheni?
Phendula kuRaul Sampedro
Uxolo, wenza njani ukuba ube yingcambu yomsebenzisi?
Kuxhomekeka kwifowuni onayo, jonga kwibhlog ukuba kukho iindlela ezininzi
Xa le nkqubo yenziwe, ngaba ii -apps ezifakwe kwifowuni ziyasuswa?
Molo! Baye bandinika nje i-samsung galaxy s plus kwaye bendifuna ukuyikhulula, ukubona ezi tutorials zicaciswe kakuhle ndizamile ukulandela amanyathelo, ukurhola i-rooting indibiziwe kodwa ndiphumelele, ukuyikhulula hayi, indinika impazamo kwi Amanyathelo okuqala nasemva kokufaka ibhokisi exakekileyo, ungandixelela ubuncinci kutheni undisilela?
Umphathi uphendula lo mbuzo nceda kwenzeke into efanayo kum njengoAna
UKUBA ISAMSUNG GALAXY S I9000 IVALIWE KWI-IMEI, KUNOKWENZEKA UKUYIVULA OKANYE ASISETYENZISWA
Kutheni i-IMEI ivaliwe?
Oko kwenzeka kuphela xa sisiphelo esibiweyo kwaye ubusela buxeliwe, akunjalo?
molo ukuba unokuvula i-imeii
ukuba uyandongeza ndiza kukuxelela ukuba njani
abi608652064@hotmail.com Ungandibophelela nakwiselfowuni
iruben hood sitsho
Ewe inokutshintshwa, kukho iinkqubo ezininzi zokutshintsha ii-imeis, nangona uyitshintsha, gcina engqondweni ukuyitshintshela enye yemodeli efanayo yokuhamba kunye nakwilizwe elinye nangaphezulu kwayo yonke loo imeile ingasebenziyo, kuba ukuba bayakubamba lulwaphulo-mthetho olubi kakhulu kufana nokutshintsha inombolo yesakhelo uye emotweni, kodwa ukuba kunokwenzeka, ndiyitshintsha imei yeeselfowuni ezibiweyo ze-imei yeeselfowuni ezonakeleyo kwaye ngaphandle kwengxaki
Phendula kwiruben hood
Naliphi na igama lenkqubo yokwenza oko?
Phendula kwi riykardo
Molo, ndinayo i-Samsung Galaxy S kwaye umntu okrelekrele undivimbile, ndiyazi ukuba ndenza ngefowuni yam kwaye baxela i-ovado, kodwa esikolweni banike intombi yam kodwa ayindifundeli i-chip ye-moviestar okanye enye into endinokuyenza enkosi ngempendulo yakho naujsolrac_alaya@hotmail.com
Phendula u-juan ayala
Fracisco ngokuhlwa okuhle nceda ndinengxaki nge-i9000 s yam xa ndifumana umnxeba
m ushiya engaziwa kwaye andimazi ukuba ungubani, ungandinceda
Ndinayo i-samsung galaxy ace 5830L yayise-telcel, bandithumelela izixhobo zokuyikhulula kwaye ndiyisebenzise nayo nayiphi na inkampani (ndinomdla kwi-iusacell), ibijongeka ilungile, kodwa emva kwemizuzu eli-10 iscreen sothukile kwaye sicinyiwe kwaye rhoqo, ndingathanda ukwazi ukuba kufuneka ndenze ntoni na ukuthintela le meko, imibuliso kunye nokuvuyisana ngolwazi lwakho
Kufuneka ndenze ntoni ukuba ndine-galaxi ace 5380 yeselfowuni kwaye iziswa ivela eSpain
UMilton alvarado sitsho
Ndine-SAMSUNG GALAXY SII, ethunyelwe kum isuka e-USA Ngaba ndizokwazi ukuyenza isebenze e-El Salvador? Ndifuna ukuyenza nenkampani ye-CLARO. Babenayo le fowuni yenziwe yasebenza kwi & t. Enkosi ngenkxaso. UMilton Alvarado, wase-El Salvador
Phendula uMilton Alvarado
Inkunkuma emanzi, ayisebenzi.
Phendula ku Kassyanolariu
Ndinayo i-rom efakiweyo
I-Samsung Galaxy S, iCreed Rom V10 ye-Android 4.2
Ngaba ndingayivula i-Galaxy S?
Ndingayenza ukusuka kwi-JVU Android 2.3.6 ukuqiniseka ngakumbi
Ndiyabulisa !! Ngaba uyazi ukuba iyasebenza kwi-Samsung Galaxy SCL?
Ngelishwa ayisebenzi kwi-ICS 4.0.4, ngaba kungalunganga ukuhla uye ku-4.0.4 kwaye uzame kwakhona?
Busuku benzolo. Ndikwazile ukukhulula i-Galaxy S i9000 yam yeefowuni, kodwa kubonakala ngathi ilahlekile kunxibelelwano lwedatha. Andikwazi ukungqamanisa ukuba ayenzi nge-Wi-Fi, kwaye uGoogle akandivumeli ukuba ndenze izinto ezininzi endifuna ukuzenza. Ungandinika isandla, nceda?
Hee, kodwa bendiyazi iboss kodwa andiyizisanga, kwaye bayivimbile, ndacela i-gmail, kodwa andazi kuba bendingenayo, kuba ndingathanda ukuyithenga xa unikela kum udumo lokundinika iingcebiso malunga ne-fab.
Ndisebenzise esi sicelo kwaye iselfowuni yam icinyiwe kwaye khange iphinde ivule, ndenzeni ngoku….
Phendula u laila
Kuqala ndixelele ukuba yeyiphi imodeli yefowuni onayo.
Inkqubo ilula kwaye isebenza kakhulu. I-Samsung Galaxy S i-9000 yam igqibelele. Enkosi kakhulu kwisifundo.
Phendula kwi DiMiTrI_oNe
Molweni kulungile. Ndidlula kwinyathelo lesi-2, emva kokukroba ifowuni, ukufaka i-Busybox, ukuvula kunye nefowuni, galaxy S, kuthatha imizuzu emi-5 ngescreen esimnyama… ndenza ntoni ??????? ' Enkosi
Manene namanenekazi, ndiyikhulule ifowuni ndaphola.
Ndinengxaki xa ndidibanisa iselfowuni kwi-pc indixelela oku kulandelayo ukuba ndinengxaki nge-sansung Android edityanisiweyo ye-adb interface
Ungandixelela into endinokuyenza?
Phendula i remi
Kulungile ndinengxaki xa ndidibanisa iselfowuni kwi-pc utsho oku kulandelayo
Awunakho ukufaka i-sansung Android edityanisiweyo ye-adb interface
ungandixelela ukuba mandithini
UFrancisco… ngokungathandabuzekiyo, ingaba le ndlela ingasetyenziswa nge-Samsung Galaxy I9001, ?? Ndicinga ukuba ithi galaxy S plus ...
Ndingathanda umntu andincede ndikhulule i-sansungalaxi yam bandibiza imali eninzi ngokuzikhulula ndingavuya kakhulu ukuba umntu angandinceda ndibulise kwangaphambi inombolo yam yefowuni 635 41 55 54 igama lam uEnrique enkosi kwakhona
Unesifundo esipheleleyo apha kwi-Androidsis
Mva kwemini, ndizama ukukhulula i-samsung galaxy s plus, indinika impazamo xa ndifaka i-busybox v1.20.2 kwaye ikwanika impazamo xa ubhala i-EFS kwi-Unlock. Uncedo nceda?
Akukho ndlela, ndizamile ngeebhokisi ezi-2 ezixakekileyo ezivela kwivenkile yokudlala eneenguqulelo ezahlukeneyo, iqhubeka indinika impazamo xa urekhoda ifolda ye-Efs. Nceda umphefumlo onobubele undincede.
Molo uFrancisco, ukuba ndiyisusile, ndenze onke amanyathelo ndade ndakhuphela i-Galaxy S Unlock, kodwa ndathi ndakuyiqhuba kukhetho lokuqala, ukhetho lokukrola lwandinika impazamo, ngokukodwa ithi Impazamo, ayigcinwanga.
Yeyiphi ingxelo ye-Android obalekayo?
Inguqulelo ye-firmware 2.3.5
Kuyamangalisa ukuba ayisebenzi kuwe njengengcambu, uyenze njani ingcambu?
Molo uFrancisco, mva kwemini, uyingcambu njengoko isifundo sisitsho, khuphela iSuperOneClik kwiPC, qhagamshela iselfowuni nge-USB, uyiqhube kwaye ufake usetyenziso lweSuperuser kwiselfowuni.
Molo ekuseni uFrancisco, andifumananga mpendulo ivela kuwe, njengoko benditshilo, ukuba ndiyayiphula ngeSuperOneClik, ndingayikhupha njani?
Yiya kwi-superuser App kwaye ujonge ukuba isicelo sokuyikhupha sinemvume yengcambu enikiweyo.
Nge-15/04/2013 ngo-09: 27, «Disqus» wabhala:
Molo uFrancisco, ndivule i-app ye-superuser kwaye kwavela izicelo ezimbini, i-busybox pro kunye ne-galaxy s yokuvula, zombini njengoko zivunyelwe, andazi ukuba ndingajonga njani imvume yengcambu.
UFrancisco, yonke into ibonakala ichanekile, xa ndivula i-galaxy s kuvula iwindow encinci ibonakala inyamalale emva kwemizuzwana embalwa ethi "imvume yabona banikiweyo inikwe i-galaxy s yokuvula", incopho yethebhu yokuvula, inyathelo lokuqala 1, ndiyamxelela ukuba ewe, kwaye kubonakala ifestile isithi “Nikela. Impazamo, ayigcinwanga. »
Molo ekuseni uFrancisco, izolo ndicele ikhowudi yokuvula nge-IMEI yesamsung galaxy S Plus GT-I9001 kwaye kuyacaca ukuba ikhutshiwe kodwa xa ndibeka isim yomnye umsebenzisi ayivumeli okanye ibize okanye idibanise kwi-intanethi okanye nantoni na konke konke Ingathi ayiyamkeli inethiwekhi, nangona isithi imististist ukuba ngulo mntu ndingene kuye kwakhona, andazi ukuba ndingenza ntoni. Ingaba ungandinceda. Imeyile yam yile pdlfp@hotmail.com.
Ndiyabulela kakhulu ngoncedo lwakho. Umbuliso.
Jonga kulwazi lwefowuni ukuba ulahlekelwe yi-IMEI
Nge-Epreli 9, 2013 10:18 pm, uDisqus wabhala:
Sawubona uFrancisco, andilahlekanga yi-IMEI, ndinayo le ndinekhowudi yokukhupha, endiyifakileyo izolo emnxebeni kwaye kuyabonakala ukuba iyasebenza, ndikhe ndacofa ulandelelwano * # 7465625 # ukubona ukuba yonke into IVALIWE kwaye kunjalo, kodwa andikwazi ukwenza iminxeba, kufana nokuba ayamkeli umsebenzisi omtsha.
Enkosi ngoncedo lwakho kwakhona.
Jonga ukuba i-IMEI yakho yeyantlandlolo kwaye ayitshintshanga kwenye.
Nge-Epreli 9, 2013 10:42 pm, uDisqus wabhala:
I-IMEI iyafana naleyo ithi phantsi kwebhetri, ikwayiloo nto iphuma nayo kwifowuni. ayisiyiyo eyesiqhelo. 351722059013585
Ewe, emva koko iya kwimo yokubhabha imizuzwana embalwa kwaye ubuye uphume, ukuba ayikusebenzeli, kusenokwenzeka ukuba awunayo indawo apho ukhoyo, zama ukuya kwenye indawo ukuze ubone ukuba iyakusebenzela.
Ndiyibeka kwimowudi yenqwelomoya, kwaye ndinendawo yokugubungela kodwa i-H ayiphumi kuthungelwano, ngokungathi ayiyibambanga inethiwekhi, kodwa ndinenye into ehamba nayo ecaleni kwayo kwaye ine-network kunye nenethiwekhi. Andazi ukuba kwenzeka ntoni kuba xa ndingena ikhowudi yokukhupha, yonke into ibilungile. Enkosi.
Qwalasela i-APN nangona injalo kuphela yinethiwekhi yedatha
Nge-Epreli 9, 2013 11:01 pm, uDisqus wabhala:
Ndiyilungiselele i-APN kwaye inethiwekhi yedatha isebenza ngokugqibeleleyo, iyangena kwi-intanethi kwaye inedatha, ukogquma kuxinekile kodwa akunakwenzeka ukufowunela okanye ukufumana okanye ukuthumela imiyalezo, kutheni kunjalo?
Molo, kukho into eyenzekileyo kum engakhange ndiyisombulule kwaye bendihlaziya isoftware kangangeentsuku ezimbini kwaye ukukhutshwa bekuhambile, imeko yokuba ikhadi liyandazi, kodwa lindibuza ikhowudi yenethiwekhi kwaye ndiyise IsiTshayina apho ndiyikhuphe khona kwaye bandixelele ukuba ayongxaki yokukhululwa ukuba akukho nto inokwenziwa kwaye ikhadi lenkampani ephathekayo lilungile, ndingenza ntoni?
Sebastian Soto sitsho
Ngaba kunyanzelekile ukuba ndishiye i-CHIP yenkampani yam endaweni okanye ndingayenzi le nto?
Phendula uSebastián Soto
Molo, ndingayisebenzisa inkqubo kwiGALAXY S4,… .. enkosi ngempendulo yakho
Andiqondi ukuba kufanelekile kuba sisiphelo esitsha kakhulu.
Molo, ungasisebenzisa isicelo ukuvula i-SAMSUNG GALAXY S4 ????? …… ..kwaye ngawaphi amanyathelo oza kuwalandela ?????… .Ifowuni yam ivela e-USA kwaye ndisePeru …… .. Uyakwazi ukukhululeka?
Andiqondi mhlobo, zama kwaye usixelele.
UMc Andruu sitsho
Ngaba unokuvula i-Galaxy S3 okanye i-S4 ngendlela efanayo?
Phendula Mc Andruu
I-Galaxy S3 inokuba yiyo, kodwa ngokuqinisekileyo ayisiyiyo, okomzuzwana.
Inqaku elihle kodwa…. Ngaba i-S2 inokukhutshelwa uClaro? Enkosi
ilunge kakhulu i-franc ukuba umbuzo onjalo ndiyikhuphele njani i-app .. galaxy s ukuvula xa ndinika ukhetho olu-1 lokwenza ikopi ye-efs inike impazamo ingagcini .. ndifuna ukuthi molo crac
UJulius Caesar sitsho
Molo, ndingathanda ukuba undincede ukuvula i-samsung galaxy gt.s5570l indicela iakhawunti ye-gogle kwaye sele ndiyibekile eyam kuyo kodwa ayiyamkeli, nceda undincede
Ngaba ukhona umntu one-Samsung galaxy S plus (GT-I9001) ophumeleleyo ukuyenza isebenze?
Molo uFrancisco! Ndinomnyele we-galaxy s2 okhutshwe nge-galaxy s unlock, umntakwethu ibinguye owukhuphileyo, yakugqitywa, kufakelwe uhlobo lwakudala kwaye umntakwethu akacebisi ukuba ndiyihlaziye kuba esithi akazi kuzokwenzekani. Ngaba ungandazisa ukuba ndingenza uhlaziyo? kukuba ingxelo endinayo yoyikeka ,,,, inika iingxaki ngakumbi kunayo nayiphi na enye into. Enkosi. inyanga118.it@gmail.com
Ungahlaziya ngokuzolileyo, ndikhulule uninzi ngale ndlela kwaye ndibakhanyisele kaliwaka.
Ufff ndinempumelelo ye-sansung galaxy win kwaye sele beza kuyivimba, ndingenza ntoni ukuze ndingalahleki liqela
Ndiyathemba ukuba ungandinceda ngokukhawuleza
usebenzela udumo lomnyele ??
Khuphela usetyenziso kwaye luyakukuxelela ukuba luyahambelana okanye cha
Molo mhlobo, jonga, ndivela e-El Salvador kwaye ndikhanyisa imodeli yam ye-Galaxy gt-i9000 kwaye ndilahla uphawu ngalo lonke ixesha kwaye izithethi azisebenzi ngaphandle kokuba ndiqhagamshele izandla ezingenanto ndivela e-El Salvador yeyiphi i-firmware yengingqi yam?
ndicela undincede kuFacebook wam https://www.facebook.com/joeyg.elcristotka Ndidinga ukwazi ukuba yintoni i-firmware ye-Galaxy i9000 yam endivela e-El Salvador
Molo ndingathanda ukubona ukuba ngaba kukho nayiphi na inkqubela yokufumanisa i-galaxy
Molo uFrancisco ndinomthala we-samsumg i9001 kwaye ndingathanda ukuyikhulula, ingxelo endinayo yi-2.3.6. Uyazi ukuba ungayenza njani?
Molo uFrancisco, ndizamile ukukhulula iselfowuni (i-GT-I900 kunye ne-Android 2.3.6) ngale ndlela kwaye iyayikhulula, kodwa ndifumana i-imei engabhaliswanga okanye into enjalo. Xa ubuyisela ifolda yefayile ukuphazamiseka kwesiphelo kwakhona, ungandinceda?
Molo, ndiyenzile kwaye yonke into ibigqibelele .. enkosi kakhulu. Kuqala khange ndiyamkele le sim intsha, kodwa ngoku ndiyayibona. Emva koko iselfowuni yaqaliswa kwakhona: / kodwa sele iqhelekile.
Kwakhona enkosi kakhulu ... XD
Ngaba ibhokisi exakekileyo iyafuneka?
Molo uFrancisco, ndinenguqulo ye-s5570L engu-2.3.6, ndiyisusa nge-mini odin kwaye ndiyinike igama elitsha lokuhlaziya i-zip, i-superuser Android iyavela kwaye xa ndiyivula akukho nto ithi ayinanto, ndenze yonke into nge-usb, layisha ibhokisi exakekileyo 1.40.0.0 .XNUMX kunye ne-galaxyaceunlock apk
xa ndicofa ibhokisi exakekileyo, indixelela ukuba andinasicelo sokuvula, ndingayisusa njani le ngcambu, endicinga ukuba ayisebenzi okanye kukuba ndenze yonke into engalunganga, ndingayivuyela impendulo, uxolo ngobude, enkosi kakhulu
Ukubulisa ndiqaphele ukuba uninzi lunengxaki efanayo kodwa andisiboni isisombululo, kukuba ndingumsebenzisi wengcambu ndikwanayo ne-titanium backup kwaye ndiyifakile ibhokisi exakekileyo, (ndinike imvume yabangaphezulu kwe-busybox kunye nokuvula) emva koko s ukuvula xa ndiza kuyikhulula ndihlala kwinyathelo loku-1 elingenakugcina ifolda, indinika impazamo kwaye ithi impazamo ikwibhokisi exakekileyo, kodwa ndiyikhuphele amatyeli aliqela kwaye ndiyifakile, ( ndisebenzise ezi-2 kwintengiso), ndikukhuphele kwakhona ukuvula amaxesha aliqela xa kunokwenzeka, kodwa andinakukwazi ukuyilungisa loo ngxaki ukusuka kwinyathelo loku-1 Ndinomnyele we-t959v osuka kwiselfowuni t (ngokufanayo nophilileyo) nge-gingerbread enkosi kakhulu yonke into hectortor@yahoo.com
UGustavo Morales Herrera obambe umfanekiso sitsho
Molo ndingathanda ukwazi ukuba i-sansung galaxi s5 ngokuqinisekileyo inokuphila kumovistar ngaphandle kokuphulukana nezicelo, enkosi,
Phendula kuGustavo Morales Herrera
Molo, ndineGPS S SCL I9003 kwaye ndikhuphele i-Galaxy S Unlock prog, kwaye kwifolda # 2 ndifumana enye ¿? Ukusuka apho andinakwenza into echazwa ngumhlohli.Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba ndingayilungisa njani le nto?
Umhlobo ndincede kuthungelwano ukuvula i-sansung galaxy fame lite gts6790L
Molo, ndinengcambu kunye nebhokisi exakekileyo ... kodwa ndisafumana impazamo kwinqanaba lokuqala. into endiyenzayo?
Molo .. Andiyiqondi into oyithethayo ngento yokuba iselfowuni incothukile ... ungandichaza… iselfowuni yeyenkampani kunjalo… ndifuna ukuyikhulula… ngoku ndixhume ne-wifi kodwa ngaphandle sim .. enkosi
U-Ernesto Sanchez sitsho
Molweni zihlobo ndiyilibele iphasiwedi kwaye andikwazi ukufikelela kuyo andikwazi ukuvula ithebhulethi yam yi-samsumg galaxy S Ndilibele iphasiwedi ndincede
Phendula u-Ernesto Sánchez
Umbuzo wam ngulo, ndigqibile ukuhlawulela i-terminal yam ndaza ndacela ikhowudi yokukhupha kwaye bandinika engalunganga kwaye ivinjiwe, ngoku ithi mna amgo ukuba ndinayo yokulungisa isony kunye nesony yokulungisa endiyiyo ndibandakanyeka ukusukela ngoMeyi ukuba ndingenza into evulekileyo umntu onokuvula iifowuni zokubulela